'Ammaaf meeshaan waraanaa to'atame hin jiru'-Kantiibaa magaala Negeellee - BBC News Afaan Oromoo
'Ammaaf meeshaan waraanaa to'atame hin jiru'-Kantiibaa magaala Negeellee
Madda suuraa, feesbuukiirraa
Oduun mana Amantaa Ortodoksii Tawaahidoo magaalaa Negellee Arsii keessatti meeshaan waraanaa to'anno jala ooleerra jedhamee miidiyaa hawasummaarratti tamsa'e sirri akka hin taane Kantiibaan magaalichaa obbo Aliyyii BBC'tti himan.
Meeshaan qabemeeraa jedhamuun dhara haa ta'u malee, guyyoota lama mormiin dhalatee ture keessatti meeshaan waraanaa mana amantaa Ortodoksii magaalittii keessa jirurraa dhukaafamaa akka ture himan.
''Ammaaf wanni achitti qabamee to'atame, wanni qaamaan qabame hin jiru, dheengadda dura sagaleen dhukaasaa achii dhagaahamaa ture jira.''
Manneen Amantaa Ortodoksii jaha ta'an magaala Negellee Arsii keessa jiraachuu kan nutti himan obbo Aliyyiin, kanneen keessaa manni amantaa dhukaasni keessatti dhagaahamaa ture Batsakaana Goorgiis jedhamu akka ta'e himaniiru.
''Manni amantaa kun kuusaa meeshaa waraanaas akka ta'e odeeffannoo hawaasarraa argamuufi wanti qabatamatti mul'atu tureera, ''jedhan.
Meeshaa waraanaa qabatanii deemuun dhorkame
Mana Amantaa waan ta'eefi dhimma amantaa keessa mootummaan galuu hin qabu sababa jedhuun sakatta'uuf yaalamee akka hin jirrees dubbatan.
''Akka ragaa harkaa qabnuun meeshaaleen waraanaa kun takka takka manneen amantaa baadiyyaa keessa jiranitti akka geeffamaniifi akka deebifaman odeeffannoo qabnas'' jedhaniiru.
Barreessaa mana Lubbummaa aanaa Negellee Arsii kan ta'an barsiisaa solomoon Zagayyee oduun meeshaan waraanaa to'atame jedhamu ''gonkumaa dhugaa mitii'' jedhan.
Mana Amantaa keenya keessatti meeshaan waraanaa kamuu jiraachuu hin danda'u, meeshaan jira kan jedhu kan dhugaarrraa fagaateedha, kabaja mana amantaas kan tuquudhaa''jedhan.
Guyyaa Roobii wayita Fannoon adda baabayii magaalittii keessatti dhaabamee ture buqqifamee jeequmsi ka'ettis wanti meeshaan waraanaa bataskaanichaa dhukaafamaa ture jedhus dhugaa miti jedhan.
''Yeroo dargaggoonni gara waldaa dhufan ofirraa ittisuuf mukeen waldaa akka haaratti ijaaramurraa fudhatan malee cirumaa wanti meeshaa waraanaa jedhamu hin turree'' jedhan.
Wayita yaaliin Fonqolcha mootummaa naannoo Amaaraarratti yaalamee ture fi sana duras sochiin meeshaalee waraanaa guddaan ''garee B/G Asaaminaw Tsiggeetiin leenjifamaniin'' magaalittii keessa akka ture Kantiibaa Aliyyiin dabalanii himaniiru.
''Waggaa kana keessa xiinxala gaggeessaa turre keessatti meeshaan waraanaa hangaa ool kuufamee jiraachuu bira geenyeerraa.''
Meeshaleen waraanaa gurguddoon kuufamanii jiraachuu mirkaneeffachuu isaanii himanii, ''kun ammoo humna keenyaan ol ta'ee opireeshinii cimaa waan barbaaduuf, soda nageenyaa magaala qofa akka hin taane qaama beeku qabu hunda beeksifnee jirra'' jedhan.
''Namni mana kireeffatee galu, kan waa nyaatullee hin qabne afooshaan, harka lafa jalaatiin meeshaa bitachuu akka qabu gochuun sochii bal'aan turee''jedhan.
Guyyaa Roobii wayita mormiin dhalatu dhimmichi bifa jijiirratee waan amantaa irratti xiyyeefatu akka ta'u yaalamee akka tures nutti himaniiru.
Guyyaa sana sababa lafa bulchiinsa magaalichaarratti Fannnoon Bataskaan Ortodoksii dhaabachuurratti falmii yeroo dheeraaf ture sabab akka ta'e himanii, sababa Kanaan lubbuun nama tokkoo darbee namni ajjeechaa kana raawwates qabamuu nutti himaniiru.
Shawaa Roobitii hanga Harbuutti humnoota nageenyaan ala meeshaa qabatanii socho'uun dhorkame
15 Ebla 2019
Filannoo biyyaalessaa danquuf shirri dhoksaan godhamaa ture fashalaa'e jedhame
'Ta'e jedhamee biyya bakka bu'ee akkan hin dorgomne ta'aa jira' - Atileet Qananiisaa
5 Caamsaa 2021
'Haala Itoophiyaan keessa jirtuuf mariin biyyaalessaa barbaachisaadha' - Dr Awwal Aloo
'Shanee' fi TPLF eenyu, shororkeessummaan ramadamuun isaanii hiikaa maal qabaataa?
Biliyeneroota addunyaa kanaa bultoo isaanii diigan shan
Jireenya Biil Geetisiifi Meliindaa Geetis suuraadhaan
Teeksaasitti baqattoonni 97 mana jireenyaa tokkotti dhokfamanii argaman
'Kaaraatee kanan baradhe seexana baasuuf jecha miti'
Yeroo dhuma kan haaromfame: 28 Waxabajjii 2019